Bobby Soxer - #21 [2015 Album] 320Kbps ! ( Update Download Link !) - Mg Shan Lay
Home Album Bobby Soxer Lil Chan မိစန္ဒီ လွှမ်းပိုင် အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် ကျော်ထွဋ်ဆွေ Bobby Soxer - #21 [2015 Album] 320Kbps ! ( Update Download Link !)
Bobby Soxer - #21 [2015 Album] 320Kbps ! ( Update Download Link !)
11:23:00 AM Album, Bobby Soxer, Lil Chan, မိစန္ဒီ, လွှမ်းပိုင်, အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်, ကျော်ထွဋ်ဆွေ,
#21 Album 320Kbps MP3
B Sox ဆိုတဲ့ထက်ထက်
စနေမ [Feat.Lil Chan]
အိပ်မက်များနှင့်ကခုန်ခြင်း [Feat.Irine Zin Mar Myint]
ကြယ်ကလေးရဲ့ပုံပြင် [Feat.Hlwan Paing]
နဖူးမှာရေးတဲ့စာ [Feat. Mi Sandi]
ဘွာတေး [Feat. Kyaw Htut Swe]
အချစ် / အပြစ် / ၂၁
Tags # Album # Bobby Soxer # Lil Chan # မိစန္ဒီ # လွှမ်းပိုင် # အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် # ကျော်ထွဋ်ဆွေ
Labels: Album, Bobby Soxer, Lil Chan, မိစန္ဒီ, လွှမ်းပိုင်, အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်, ကျော်ထွဋ်ဆွေ